Global Voices teny Malagasy » Mpanao Sariitatra ao Myanmar Manakaiky Ny Vahoaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2015 17:50 GMT 1	 · Mpanoratra The Irrawaddy Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Ity lahatsoratra  navoaka ity dia avy amin'ny The Irrawaddy, tranonkala firay ampahalalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty. Nanontanian'ny tonian-dahatsoratry ny Irrawaddy, Aye Chan Myae, mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ireo sariitatra  sy ny asa fanaovana gazety ireo mpanao sariitatra, Maung Maung Aung sy Win Aung.
Maung Maung Aung: Efa ho 45 taona izao no nanoratako ireo sariitatra. Nandritra io 45 taona io, nanakaiky ny vahoaka ireo mpanao sariitatra, nitarafana ny toekarena, sosialy ary ireo toe-draharaha ara-politikan'ny firenena. Ankehitriny, tahaka ny mahazo fahalalahana bebe kokoa izahay taorinan'ireo taonan'ny fameperana. Vokatr'izany, maro ireo olona no nanao  sariitatra. Misy karazany roa ny mpanao sariitatra. Ny voalohany dia ireo mpanao sariitatra maka ny endrika kanto ho toy ny fiainany ary ny faharoa kosa dia ireo mpanao sariitatra manararaotra ny zava-misy. Nisy ny fiantraikany tamin'ireo izay nanohy nirona tamin'ny zavakanton'ny sariitatra narahana finoana lalina. Misy ny fitsipi-pitondrantena tsy an-tsoratra fa arahina eo amin'ireo mpanao sariitatra, araka izay notovozinay tamin'ireo zokiolona. Taloha, nisy ireo zavatra noraràna sahala amin'ny fanesoana ny mahantra sy ny kilemaina ary ny fanafihana olona manokana. Manan-danja kokoa (ny tsy fanaovana zavatra tahka izany) ao anatin'ity vanimpotoanan'ny demokrasia ity. Ho an'ny mpanakanto iray, ny demokrasia dia toy ny sabatra roa lela. Raha azo ampiasaina hanindronana ireo hafa izy, mety handratra ilay mpanakanto ihany koa. Noho izany, tsy marina fa hoe afaka manao sary araka izay tiany ireo mpanao sariitatra. Tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny asany izy ireo rehefa nivelatra nandritra ny fotoana fohy ny lalànan'ny demokrasia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/08/75624/
 no nanao: https://globalvoices.org/2015/03/11/cartoons-condemn-state-brutality-in-myanmar-after-police-thugs-attack-student-rally/